Madaxwayne Biixi oo La Filayo Inuu Kala Diro Golayaasha Deegaanka | Baligubadlemedia.com
Madaxwayne Biixi oo La Filayo Inuu Kala Diro Golayaasha Deegaanka
Warar aan la xaqiijin oo isa soo taraya ayaa sheegaya suurtogalnimada in Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi, uu kala diro goleyaasha deegaanka ee dalka, oo ay doorashadoodu markii labaad dib u dhacday.
Wararkan suuqa soo galay ee kala dirista goleyaasha deegaanada ee dalka, ayaa waxa miisaankooda sii cusleeyay ka dib markii uu Madaxweyne Biixi goleyaasha deegaanada ee dalka ka reebay warqad uu u gudbiyay golaha guurtida oo nuxurkeedu ahaa in muddo kordhin loo sameeyo golaha wakiilada ka dib markii doorashadoodii dib u dhacday.
Si rasmi ah looma garanayo sababta uu Madaxweyne Biixi goleyaasha deegaanka ee dalka uga reebay warqadda uu u gudbiyay golaha guurtida, waxase ay dadka badankiisu saadaalinayaan in Madaxweyne Biixi kala diri doono goleyaasha deegaanada ee dalka, magaalooyinka dalkana uu u samayn doono maayaro iyo ku xigeeno, inta doorashadoodu qabsoomayso.
Golaha guurtida ayaa sannadkii 2017 waxay goleyaasha deegaanada ee dalka u kordhiyeen muddo sannad iyo bilo ah, waxaana la filayay in doorashada deegaanka mar lala qabto doorashada baarlamaanka oo ahayd March 2019.
Madaxweyne Biixi, ayaa la sheegay inuu awood sharci u leeyahay inuu kala diri karo goleyaasha deegaan ee dalka. Haddii uu Madaxweyne Biixi kala diro goleyaasha deegaanada ee dalka waxa suurtogal ah inuu ku helo taageero shacab, maadaama oo ay shacabku aragti isku mid ah kaga soo horjeedaan goleyaasha deegaan ee dalka oo eeddo kala duwan loo jeediyo.